Vaovao - Namoaka ny Fetiben'ny rahona ara-toekarena sy varotra sinoa-afovoany sy atsinanana eropeana ary varotra rahona manokana any Chengdu ny vondrona Brocade
Tamin'ny faha-28 Oktobra dia notanterahin'i Chengdu tamim-pahombiazana ny foara ara-toekarena sy varotra sinoa-afovoany sy atsinanana eropeana ary varotra rahona manokana any Chengdu. Ity hetsika ity dia ampahany lehibe amin'ny fampirantiana dizitaly momba ny varotra iraisam-pirenena sinoa-eropeana tamin'ny taona 2020. Liu Xiaoliu, Ben'ny tanàna lefitra ao amin'ny Governemantan'ny Vondrom-bahoakan'i Chengdu sy ireo mpitarika mifandraika amin'izany, ny mpitarika sy ny ekipan'ny filankevitra sinoa ho fampiroboroboana ny varotra iraisam-pirenena, ny masoivohon'ny delegasiona eropeana any Sina, ny solontenan'ny orinasan-tserasera nomerika Chengdu Brocade Artigence Intelligence Group ary Aotai Nanatrika ny lanonana fanokafana ny fampirantiana ny mpitsabo. Ny fitazonana ity foara ity dia naneho ny maha-zava-dehibe ny fiaraha-miasa ara-toekarena sy ara-barotra eo amin'i Chengdu sy i Eoropa tamin'ny vanim-potoana taorian'ny valan'aretina, ary nanisy tosika vaovao ihany koa ho an'ny fiaraha-miasa lalindalina kokoa eo amin'i Chengdu sy i Eropa.
Dr. Guo Sha, ny talen'ny Brocade Art intelligence Intelligence Group, Ramatoa Hao Fang, ny filoha, ary ny ekipan'ny sampana varotra iraisam-pirenena elektronika dia nandray anjara tamin'ny fivoriana, ary talohan'ny fivoriana dia nandray anjara tamin'ny fivoriana niaraka tamin'ny mpitarika ny Ny governemanta monisipaly Chengdu, ny ivontoeran'ny varotra iraisam-pirenena an'ny firenena mikambana, ny departemantam-panjakana sinoa sy afovoany ary atsinanana eropeana, fikambanam-barotra ary ireo solontenan'ny orinasa dia nifanakalo fifankatiavana.
Nanatrika ny lanonam-panokafana i Chen Jian'an, filoha lefitry ny filankevitry ny Sina ho fampiroboroboana ny varotra iraisam-pirenena ary nanao kabary tamin'ny alàlan'ny horonantsary. Nandritra ny lahateniny, Chen Jianan dia naneho ny fisaorany tamim-pahatsorana an'ireo vondrona mifandraika amin'ny filankevitra sinoa momba ny fampiroboroboana ny varotra iraisampirenena sy ny Antenimieran'ny varotra iraisam-pirenena China noho ny fanohanan'izy ireo mafy sy ny fandraisana anjara mavitrika. Ny fampirantiana dia natao ho fahatsiarovana ny faha-45 taona niorenan'ny fifandraisana diplaomatika teo amin'i Sina sy ny EU ary hampiroborobo ny fampandrosoana ny firenena Chengdu sy Afovoany Atsinanana sy Atsinanana.
Liu Xiaoliu, Ben'ny tanàna lefitra ao amin'ny Governemantan'ny Vondrom-bahoakan'i Chengdu, dia nampahafantatra tamim-pahatsorana ny fampiroboroboana an'i Chengdu tamin'ireo vahiny sinoa sy vahiny tamin'ny foara. Nilaza izy fa i Chengdu dia toekarena nasionaly, teknolojia, fitantanam-bola, kolontsaina ary famoronana, fifanakalozana ivelany ary fampiraisana iraisam-pirenena fantatry ny filankevi-panjakana. Ny foibe afovoany, miaraka amin'ny valan-javaboary sy lampihazo ho mpitatitra, dia manolotra tetikasa fampiasam-bola toy ny toekarena nomerika, fanabeazana STEAM, fototra fanandramana fanavaozana ara-tsiansa sy teknolojia, fizahan-tany ara-kolontsaina ary teknolojia avo lenta. Chengdu dia manantena fatratra fa ireo mpandraharaha manerantany dia hitady fitrandrahana fiaraha-miasa miaraka amin'i Chengdu amin'ny sehatry ny famokarana marani-tsaina, angovo maitso, fitaovana fitsaboana, famoronana kolontsaina nomerika, ary logistika iraisampirenena, ary hikatsaka fampandrosoana iraisan'ny orinasa sy fandrosoan'ny tanàna.
Taorian'izay dia nilaza ny masoivohon'i Vondrona Eropeana any Sina, Yu Bai, fa nihoatra ny Etazonia i Sina ka izy no mpiara-miasa varotra lehibe indrindra amin'ny Vondrona Eropeana voalohany hatramin'ny taona 2020. Samy manana ny azy avy i Shina sy ny firenena eropeana afovoany sy atsinanana. tombony, fifamenoana matanjaka ary fanantenana marobe amin'ny fiaraha-miasa. Ny sehatry ny raharaham-barotra sy varotra sinoa afovoany sy atsinanana eropeana, nankatoavin'ny filankevi-panjakana ary nokarakarain'ny filankevitra ho fampiroboroboana ny varotra iraisam-pirenena, dia nahazo fiheverana sy fanekena lehibe avy amin'ny vondron'orinasa iraisam-pirenena. Amin'ny maha mpiara-miasa varotra lehibe an'i Chengdu azy dia manantena i Eropa fa ny orinasa avy amin'ny andaniny sy ny ankilany dia hanararaotra ny fiaraha-miasa "17 + 1" hampiasa tanteraka ny tsenan'ny tsena lehibe "Belt and Road". Mamorona tontolo toekarena sy varotra iraisampirenena, midira amin'ny hetsika lehibe ary mangataha fiaraha-miasa.
Mandritra izany fotoana izany dia nanomboka tamin'io andro io ihany koa ny fampirantiana dizitaly eran-tany China Europe International Trade Digital. Orinasa sinoa 1 200 sy mpitsidika matihanina 12000 avy any Eropa no handray anjara amin'ity fampirantiana ity amin'ny Internet. Orinasa Chengdu miisa 60 avy amin'ny sehatry ny famokarana marani-tsaina, angovo maitso, kolontsaina nomerika ary famoronana, fitaovana ara-pitsaboana, logistika sns no nipoitra tamin'ny sehatra fampirantiana nomerika an'ny Kaomina China ho fampiroboroboana ny varotra iraisam-pirenena. Ny Brocade Group dia nampiranty bebe kokoa tamin'ity fampirantiana rahona ity tamin'ny alàlan'ny fanabeazana marani-tsaina STEAM, vokatra elektronika feo sy horonan-tsary avo lenta, toerana nomerika ary sehatra hafa. Tamin'ny resadresaka nifanaovana dia nilaza ny Dr. Guo Sha fa ny fandraisan'anjaran'ny Brocade Group amin'ny foara dia kendrena hampiroborobo ny fampandrosoana ny toekarena nomerika Chengdu sy ny fiaraha-miasa amin'ny asa fanondranana vokatra elektronika ao amin'ny vondrona.
Nandritra ny lahateniny, Lu Yiji, filohan'ny Fikambanana Digital dia nilaza fa niditra an-tsokosoko tsimoramora amin'ny famatsiam-bola sy ny varotra ny toekarena nomerika. Sina no tsena lehibe indrindra manerantany amin'ny resaka volan'ny varotra, mahatratra 600 tapitrisa dolara amerikana amin'ny tapany voalohan'ity taona ity, nihoatra an'i Etazonia, Royaume-Uni, Japon ary firenena hafa. Fifampiraharahana an-tserasera dia nanjary fironana malaza ny varotra, ny fiantsenana ary ny fandefasana mivantana an-tserasera. Ny teknolojia niomerika dia mitondra fanovana indostrialy ary mampiroborobo endrika varotra vaovao. Fitaovam-piadiana io ary ho fironana ho avy izay hitondra tombony ho an'ny olona manerantany.
Ny foibe dia natolotry ny filankevitra sinoa ho fampiroboroboana ny varotra iraisam-pirenena sy ny governemantan'ny monisipaly Chengdu, ary natolotry ny Chamber of Commerce iraisam-pirenena, ny filankevitra sinoa ho an'ny fampiroboroboana ny varotra iraisam-pirenena any Eropa dia nahatratra ambaratonga vaovao.